Mitohy amin’ny fanagadrana mpanao gazety ny famoretana ny mpanohitra any Alzeria · Global Voices teny Malagasy
Natao 'antony' hanasaziana sy hampanginana mpanao gazety ny fisamborana
Voadika ny 06 Avrily 2020 4:41 GMT
Vakio amin'ny teny English, Deutsch, Français, Español, বাংলা, Ελληνικά, عربي, Italiano, Nederlands, English
Mpanao fihetsiketsehana manohitra ny governemanta ao an-drenivohitra ao Alger tamin'ny 6 Jolay 2019. Sary avy amin'i ​​Farah Souames, nahazoana alalana.
Herintaona mahery taorian'ny nanombohan'ny fihetsiketsehana manerana ny firenena tany Alzeria nitakiana ny fanavaozana ara-politika sy ara-toekarena dia mbola nanohy ny paikadiny amin'ny famoretana ihany ny governemanta mba hampanginana ireo mpitsikera sy mpanao gazety nitatitra ny fihetsiketsehana.
Tamin'ny 15 Martsa, nolavin'ny fitsarana tao Alger, renivohitra, ny famotsorana ilay mpanao gazety Sofiane Merrakchi, izay notanana am-ponja nanomboka tamin'ny volana Septambra 2019.
Mpanao gazety mahaleo tena miasa amin'ny sehatra fampahalalam-baovao vahiny i Merrakchi, anisan'izany ny fantsom-pahitalavitra Al Mayadeen ao Beirota sy ny fahitalavitra Al Jazeera izay an'ny fanjakana Qatari. Voampanga izy tamin'ny fanitsakitsahana ny lalàna mifehy ny fadintseranana noho ny ” tsy fandoavany fadintseranana tamin'ny manampahefana tamin'ny fanafarany fitaovana fampielezam-peo. ”
Araka ny voalazan'ny Komity Mpiaro ny Mpanao Gazety dia mety higadra roa taona ka hatramin'ny fito taona an-tranomaizina miaraka amin'ny fandoavana lamandy amin'ny saran'ny vidin'ny fitaovana nafarany.
Araka ny filazan'ny Reporters Sans Frontières (RSF):
Mpanao gazety tao amin'ny radiom-panjakana Alzeriana teo aloha i Merrakchi ary noahiahian'ny sampandraharahan'ny mpitandro ny filaminana ho naka sary ny fihetsiketsehana ho an'i Al Jazeera izy. Notsikerain'ireo manampahefana imbetsaka ny fitantarana nataony momba ny fihetsiketsehana tato anatin'ny volana vitsivitsy. Fantatra fa hoentina eo anatrehan'ny mpampanoa lalàna izy.
Tao anatin'ny fanambarana navoaka tamin'ny 5 Martsa, namaritra ny fiampangana an'i Merrakchi ho ”fitadiavana antony” ” hampanginana azy” ny fikambanan'ny Mpanao Gazety Alzeriana (JAI):
Nikendry manokana ny fahafahany manatanteraka ny asany amin'ny maha-mpanao gazety azy ny fisamborana azy izay niseho tao anatin'ny toe-draharaha nahitana famoretana mafy ny haino aman-jerim-panjakana sy ny tsy miankina. Natao hanasaziana sy hampanginana ilay mpanao gazety fotsiny ihany ny fiampangana azy ho nandika ny lalànan'ny fadintseranana sy ny fampiasana ny fitaovan'ny fampitam-baovao mivantana – izay ampiasain'ny fahitalavitra rehetra any Alzeria.
Nigadra nanomboka tamin'ny volana Oktobra 2019 ilay bilaogera sady mpitati-baovao tsy miankina Abdelmoundji Khelladi. Nosamborin'ny mpitandro ny filaminana manao akanjo sivily izy tao an-tanàndehiben'i Constantine raha teo ampanaovana tatitra momba ny fihetsiketsehana. Voampanga ho “nanohintohina ny tombontsoam-pirenena sy firaisankinam-pirenena” izy.
Talohan'ny fisamborana azy, navitrika tamin'ny tatitra sy fanehoan-kevitra momba ny toe-draharha politika, sosialy sy toekarena ary ny hetsi-panoherana tao Alzeria tamin'ny alalan'ny bilaoginy sy ny tambajotra sosialy i Khelladi, anisan'izany ny YouTube sy ny Facebook. Mety higadra roa taona an-tranomaizina izy ary hivoaka amin'ny 1 Aprily ny didim-pitsarana.
Nanamafy ny famoretana amin'ny fahalalahana maneho hevitra, ny fahalalahan'ny fampitam-baovao ary ny fahalalahana amin'ny aterineto ny manampahefana Alzeriana hatramin'ny niantombohan'ny fihetsiketsehana. Nametra ny fidirana amin'ireo tambajotra sy ny sehatry ny tambajotra sosialy ny governemanta, nisambotra ireo mpanao gazety ary nametraka fameperana tamin'ny fitantaram-baovao momba ny fihetsiketsehana.
Nanomboka ny fihetsiketsehana ny 22 Febroary 2019 raha nanambara ny firotsahany ho fidiana fanindiminy indray ny filoha tamin'izany fotoana Abdelaziz Bouteflika ary nitohy izany taorian'ny fialany tamin'ny 3 Aprily 2019.
Mbola nanohy hatrany ny fidinana an-dalambe anefa ny Alzeriana mba hanoherana ny kolikoly, ny tsy fisian'ny asa ary ny mpitarika politika ao amin'ny firenena, ao anatin'izany ny taorian'ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny 12 Desambra izay noheverin'ireo mpanao fihetsiketsehana fa fikasana hitazonana ny fitondrana teo aloha ho eo amin'ny fitondrana ihany.
Nandresy tamin'io fifidianana io ny Praiminisitra teo aloha sady mpiara-dia amin'i Bouteflika, Abdelmajid Tebboune, ary nanao ny fianianany ho filoham-pirenena izy ny 19 Desambra 2019. Tamin'ny 5 Janoary 2020, niantso ny governemanta i Tebboune nandritra ny fivorian'ny kabinetrany voalohany [filankevitry ny minisitra] mba hanaja ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety. Mbola nitohy ihany anefa ny fandikan-dalàna.
Tamin'ny 7 Martsa, nosamborina ilay mpanao gazety Khaled Drareni raha teo am-pitateram-baovao ny fihetsiketsehana tao Alger. Nosamborina izy noho ny “fivoriana tsy nahazoana alàlana.” Navotsotra izy tamin'ny 10 Martsa taorian'ny niampangana azy ho ”nanohintohina ny firaisankinam-pirenena ” ary napetraka teo ambany fanaraha-mason'ny fitsarana. Voarara tsy hiala ny firenena ihany koa izy ary mety higadra folo taona an-tranomaizina.
Drareni no mpanorina ny tranonkalam-baovao Casbah Tribune. Mpitati-baovaon'ny TV5 Monde sy ny RSF ihany koa izy. Efa be dia be ny tatitra nataony momba ny hetsi-panoherana ny fitondrana hatramin'ny niatombohan'izany tamin'ny volana Febroary 2019. Efa imbetsaka izy no tratran'ny fandrahonana ataon'ny manampahefana tamin'ny asany.
Nivoady hanohy ny asany izy ny ampitson'ny famotsorana azy satria “tsy fahotana ny asa fanaovan-gazety.” Tamin'ny 25 Martsa, nandefa sioka izy fa nandà ny fangatahany tamin'ny fampiatoana ny fanaraha-maso ataony aminy ny fitsaràna.
Nidina an-dalambe ny Alzeriana nanerana ny firenena isaky ny Zoma nanomboka ny 22 Febroary 2019 hanoherana ny fitondrana. Tamin'ny 20 Martsa, tsy izany no nitranga raha nisafidy ny hijanona tany an-trano ireo mpanao fihetsiketsehana mba hisorohana ny fiparitahan'ny coronavirus.
Nanamafy ireo mpikatroka sy mpanao fihetsiketsehana Alzeriana fa tsy mbola tapitra ny hetsi-panoherana ataon'izy ireo fa natsahatra fotsiny amin'izao fotoana noho ny toe-java-misy ara-pahasalamana. Mandritra izany fotoana izany dia tsy mbola hita nanalefaka ny herim-pamoretany ny governemanta Alzeriana.
Tamin'ny 24 Martsa, nilaza ny Amnesty International fa voasazy higadra herintaona sy handoa onitra 50.000 dinara Alzeriana (manodidina ny 405 dolara amerikana) ilay mpitarika ny mpanohitra Karim Tabbou noho ny fanakianany ny andraikitry ny tafika Alzeriana amin'ny politika tao amin'ny horonantsary navoaka tao amin'ny pejy Facebook-n'ny antokony.